Dzidza maitiro ekudzosera iyo Safari kugadzirisazve mu macOS Monterey beta 3 | Ndinobva mac
Dzidza maitiro ekudzosera kumashure iyo Safari kugadzirisazve mu macOS Monterey beta 3
Kana iwe uri mumwe wevaya vari kuyedza iyo inoshanda sisitimu macOS Monterey iwe unofanirwa kuziva kuti vazhinji vashandisi vakanyunyuta nezve kugadziriswazve kweSafari. Ivo havajairike nazvo, asi iwe unofanirwa zvakare kuziva kuti zvinokwanisika kudzosera maitiro aya uye kudzokera kune kumisikidzwa pamberi peiyo nyowani Monterey beta. Kune izvi isu tichaona iyi diki uye yakapusa dzidziso. Asi chete kana iwe uchida kubvisa marongero eSafari muMonterey modhi.
Iine macOS Monterey beta 3, kambani zvakare yakagadzirisazve Safari's nyowani tebhu bar. Kana iwe usingade iyo inotaridzika, unogona kudzokera kune fomu yapfuura yaive irimo mune yekutanga neyechipiri beta beta dzeMacOS Monterey. Iko kutaridzika kutsva kweSafari iri kukonzera hurukuro zhinji pamhepo. Ipo paine iOS 15 beta 3 shanduko dzaive dzakapusa, ne macOS Monterey beta 3 Safari inotaridzika kunge yakanyatsosiyana zvakare. Izvi zvinoreva kuti kune vanhu vazhinji vasingade iyi nzira nyowani.
Nemabhawa akapatsanurwa, isu tava kukwanisa kuona, semuenzaniso, angangoita ese ako ekumhara. Paunenge uchidzorera reload bhatani zvirokwazvo yakanaka yekubata kubva kuApple, zvinokwanisika kudzokera kumashure kutaridzika kwekare, uko matabhu ese anotaridzika akabatanidzwa. Kudzosera iyo Safari kugadzirisazve mu macOS Monterey beta 3, zviri nyore tevera aya matanho akareruka:
NaSafari yakavhurika, tinosarudza: «Ona» mukona yekumusoro kuruboshwe. Iye zvino tinofanirwa kudzima sarudzo "Ratidza rakaparadzana tab bar". Zvakareruka seizvi. Hapana chimwe chekuita. Iye zvino Safari inoita senge yekutanga beta beta vhezheni dzeMacOS Monterey, asi nekuwedzera kweReload bhatani zvakare.
Chimwe chezvinhu chatinosuwa panguva ino, zvirinani kwenguva ndeyekuti macOS Monterey beta 3 ichiripo haitsigire yakamirirwa-kwese kwese kudzora basa. Nayo tinogona kufamba takasununguka pakati petripad uye iyo keyboard pakati peMac uye iPads.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac Os X » macOS Monterey » Dzidza maitiro ekudzosera kumashure iyo Safari kugadzirisazve mu macOS Monterey beta 3
Tenga Mac kana iPad yekoreji uye tora mamwe maAirpod
Nhasi pazvikamu zveApple zvichave zviripo paYouTube